Blelọ ahịa Marble na Pestle - China Marble Mortar na Pestle na-emepụta, ndị na-enye ya
Mpempe na Marble na Pestle
• Ejiri marble mee maka ụdị na ịdịte aka
• Ezigbo maka egị pestos, cinnamon, cloves, nuts na ndị ọzọ
• Ebuba jikọtara foto nke rustic-chic na arụmọrụ siri ike
• Elu ala dị n'ime ụlọ arụpụtara maka njikarịcha arụmọrụ na ngwakọta akọrọ na mmiri mmiri. Mkpụrụ pịrịkụl nwere akụkụ na-enweghị akwụkwọ maka arụ ọrụ
Ihe Ngwaahịa: WB 187 Ihe: marble eke: Dia.13cm, Ogo 9cm na-ebugharị: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja nke e mere site na mabul maka ụdị na ịdịte aka Ezigbo maka igwe na-egweri pestos, cinnamon, cloves, nuts na karịa mabul na-ejikọta ihe oyiyi nke rustic-chic. na arụmọrụ siri ike Ime elu emere maka oke arụmọrụ yana agwakọrịrị na mmiri mmiri. Mkpụrụ pịrịkụl nwere akụkụ na-enweghị akwụkwọ maka arụ ọrụ
Ihe: marble eke Size: dia.13cm, elu 8cm na-eburu ya: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Marble Mortar na pestle • zuru oke maka ịkụpịa ihe niile na-esi ísì ụtọ na ịme ngwakọta na-esi ísì ụtọ. • Dị mma maka ịgwakọta na ijere guacamole — ma ọ bụ maka ime pesto na ụdị sọks ndị ọzọ. • Soro jiri akwụkwọ letus mee ihe dị ka nnukwu efere e ji eje ozi. • uhere n'ime ngwa agha siri ike na-enyere aka ịkụcha ma na-egweri ihe. • Nnukwu ọgwụ na-arụ ọrụ maka gị, na-eme ka egweri, agwakọta na agwakọta nke ọma.